बुद्धिजीवी सङ्घ रूपन्देहीले २०७५ असोज १३ गते बुटवलमा आयोजना गरेको “नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था र सङ्घीयता” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै जनताले राहत नपाएको बताउनु भयो । देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयता आए पनि जनताले सामान्य सेवा–सुविधा लिन नपाएको बताउनु भयो। सीमा मिचिदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको उल्लेख गर्दै सार्वभौमिकता, अखण्डता, एकता कमजोर भएको र देशमा माफियातन्त्र हावी भएको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिलाई हतियार बनाएर स्वार्थ लिने प्रवृत्ति हावी भएको बताउनु भयो । नेपाली जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिकको ठेकेदार र माफियाहरूले दुरूपयोग गरेको उहाँको तर्क थियो ।
अध्यक्ष केसीले नेपालमा सङ्घीयता भारतको भएको, अमेरिकी र युरोपियनको जातीय सङ्घीयता असफल भएको बताउनु भयो । अमेरिकन, युरोपियन र भारतीय शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा ल्याइएको सङ्घीयता नेपालमा नटिक्ने बताउनु भयो । भारतीय ग्राइन्ड डिजाइनमा ल्याइएको सङ्घीय प्रणाली असफल सावित हुँदै गएको दावी गर्दै एउटो देश चलाउन नसेकका नेपाली जनताले सात वटा देश पाल्न नसक्ने बताउनु भयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा सङ्घीयताको विरोधी नभएको उल्लेख गर्दै पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेता केसीले नेपालमा सङ्घीय प्रणाली ठिक छैन र हँुदैन भनेको बताउनु भयो । सङ्घीयताले नै देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको र जनताले करको भारी बोक्ने काम सुरु भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा पत्रकार तथा अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घका पूर्व महासचिव शशिधर भण्डारीले “सङ्घीयताले राष्ट्रियतामा पारेको प्रभाव” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल जस्तो सानो र भूपरिवेष्ठित तथा अविकसित मुलुकका लागि सङ्घीयता खतराको रूपमा आएको बताउनु भयो ।
भण्डारीको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै साहित्यकार तथा लेखक दिल साहनीले सुरूसुरुमा आफू सङ्घीय व्यवस्थाको पक्षधर भएको भए पनि अहिले व्यवहारमा देख्दा नेपालका लागि उचित नभएको निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले सङ्घीयताको नाममा भारतीय र युरोपियनहरूका लागि नेपाल खेलमैदान जस्तै भएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, राजमोका केन्द्रीय सदस्य मनोज भट्टले प्रस्तुत गरेको अवधारण पत्रमाथि टिप्पणी गर्दै प्रा.डा. बाबुराम ज्ञवालीले हाल नेपालको चालु खर्च पुँजीगत खर्चभन्दा झण्डै दुई–तिहाइले धेरै हुनु अर्थशास्त्रीय दृष्टिले सही नभएको बताउनु भयो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानेकाले महङ्गो सङ्घीय प्रणाली खतरामा रहेको बताउनु भयो ।
प्रा.डा. रामचन्द्र आचार्यले देशमा भएका उद्योगहरू संरक्षण गर्ने र नयाँ उद्योगहरू खोल्ने सरकारले नीति ल्याउन नसकेको अवस्थामा सङ्घीयता कमजोर बनेको बताउनुभयो । प्राध्यपाक वैकुण्ठ पाण्डेले अर्थतन्त्र कजमोर हुँदै गएको र रेमिट्यान्सले मात्र देश चल्न नसक्ने बताउँदै सङ्घीयता समस्यामा परेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु पर्ने उनले बताउनु भयो ।
बुद्विजीवी सङ्घ रूपन्देही अध्यक्ष लीला बहादुर केसीको अध्यक्षता भएको कार्यक्रममा गोपाल प्रसाद गैरे, नेकपाका विनोद खनाल र मजदुर नेता सुरज खनाल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । – श्याम पोखरेल
राष्ट्रियता बचाउन संयुक्त जनसभा
दशैँको मुखमा मूल्यवृद्धि बढ्यो
अखिल (छैठौ) कास्की सङ्गठन विस्तारमा
राजमो जैमिनीको सम्मेलन सम्पन्न
युवक सङ्घको जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न
एक्काइसौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको सङ्घारमा अखिल (छैठौँ) का गतिविधि